Tokony Havela Ho Ara-Dalàna Ve Ny Toaka Any Libya? · Global Voices teny Malagasy
Tokony Havela Ho Ara-Dalàna Ve Ny Toaka Any Libya?
Voadika ny 11 Marsa 2013 22:16 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Français, Català, বাংলা, English
Miady hevitra amin'ny tokony hamelana ho ara-dalàna ny toaka na tsia ao amin'ny fireneny ny mpiserasera Libyana – taorian'ny nahitana fa mihoatra ny 50 ny olona matin'ny toaka vita tao an-toerana efa simban'ny methane. Mbola misy olona hafa mihoatra ny 470 ihany koa no nampidirina hopitaly hotsaboana, ka nampafana ny adi-hevitra amin'ny tokony hanesorana ny fandrarana ny toaka hampanara-dalàna azy, mba hahafahana misoroka ny voina tahaka izao mbola hitranga.
Samy voarara avokoa na ny fisotroana na ny fivarotana toaka ao Libya fa misy fangaro vita ao an-toerana antsoina hoe bokha amidy any amin'ny varo-maizina. Araka ny Libya Herald:
Tsy zava-tsy mahazatra na dia vitsy mitatitra aza ny fandrenesana olona matin'ny bokha, izay matetika voatanika avy amin'ny aviavy, na lasa jamba. Efa maro no maty tamin'ny herintaona.
Nampiana methanol matetika ny Bokha mba hampiakatra ny daozin'ny alikaola ao aminy.
Ao amin'ny Twitter i Khadija Ali no manoratra [ar]:
@KhadijaMAli: Raha misy ny zavatra tokony hakantsika lesona avy amin'ny voina izay miteraka adi-hevitra momba ny alikaola dia tsy afaka ny handositra amin'ny olantsika intsony isika
Hoy i Nairouz:
@Rouznai: Loza eo amin'ny firenena zakain'ny tanora lahy sy vavy ny fanapoizinan'ny toaka sy ny fahafatesana avy amin'izany
Manampy i Mohamed Mesrati:
Ao anatin'ny olona voapoizin'ny toaka sy matin'izany ny mpioko niady tamin'i Gaddafi nandritra ny revolisiona! mahamenatra!
Amin'ny resaka an-tserasera milaza fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna Islamika ny fisian'ny dokotera sasantsasany mandà hitsabo marary vokatry ny fisotroan-toaka – ary mendrika ny ho faty ireo nisotro toaka. Momba izany resaka izany dia izao no filazan'i Mojahed Bosify:
@mojahedbosify: Dokoteran'ny fahafatesana sy henatra amin'ny asany ny dokotera mandà tsy hitsabo ny marary voapoizin'ny toaka. Tokony horoahana ireny
Nanokatra kapoaka feno kankana i Rana Jawad raha nanontany hoe:
Izao ve ny fotoana/ misy ve ny fahazotoana ara-politika sy sosialy hiresahana malalaka ny momba ny fisotrioana toaka eto Libya? Mety isorohana ny fisian'ny fahafatesana ve ny fampanarahan-dalàna azy? Alefaso ny adi-hevitra..
Izay novalian'i Suilman Ali Zway:
Ny fihatsarambelatsihy (na ara-piarahamonina na ara-pivavahana) eo amin'ny mpiara-belona amintsika no tsy hahafahana miresaka amin-kitsimpo momba izany lohahevitra izany
Sy hanazavan'i Mohamed Eljarh:
Handà ny endrika rehetra fampanarahan-dalàna ny fisotroana toaka ny ankamaroan'ny olona eto #Libya eny fa na dia izay misotro azy sy efa nisotro izany matetika aza
Manolotra vahaolana i Omar Mukhtar:
Ataovy ara-dalàna io. Asio hetra io fa ho very ny asan'ireo jiolahy ireo
Ny jiolahy lazainy amin'io siokany io dia ireo mpamokatra sy ireo mpaninjara (mpivezivezy mivarotra) ireo toaka bokha namboarina tao an-toerana.
Vakinteny lalina kokoa:
Namoaka lahatsoratra mizara toa momba ny toaka i Mohamed Mesrati tamin'ny volana lasa teo tao amin'ny gazety an-tserasera amin'ny teny Arabika Al Kaf, izay hita ato sy ato.